Cotton & yengubo spandex
Ekhaya textile yengubo
Ngokweba & akhande ilaphu
Ipholiyesta nylon yengubo
TR suit yengubo
Ntambo yengubo obudaywe
Shijiazhuang PengTong imp. & EXP. Co., Ltd. ---- i yemveliso langaphandle & urhwebo zemigudu epheleleyo. Le nkampani ubuxoki e Shijiazhuang of Hebei kwentsusa textile yesizwe, leyo yenye yezi eyolukiweyo likhulu China. Kukho umatshini 400 ukwaluka kunye bokudaya eqhubekayo & umatshini eprintiweyo eligcobayo. Sinako waluke ngaphezu kwezigidi 100 kweemitha ingrey impahla kunye bokudaya ngaphezu kwezigidi 200 amalaphu ngonyaka ngamnye.
Thina nikeza ezahlukeneyo zokuvelisa laphu ukuhlangabezana neemfuno zabaxhamli beenkonzo zethu ngelo xesha. imveliso yethu kukuba imali umqhaphu -----, T / C, T / R, kukho eArabha, twill, herringbone. Bona ethengiswa kwimarike yasekhaya kwaye zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama amabini kunye neendawo ezifana US, Hongkong, mpuma Asia, kuMbindi Mpuma naseYurophu.
Sisoloko bazala kwisiseko esitsha ngezimvo ezisemgangathweni ophezulu kwaye elihle elivela umthengi.
Siza kusoloko zisekhona lo mgaqo-nkqubo "Best lweMigangatho, ahlonipha Credit, Service ngokunyanisekileyo kunye ngokwasemphefumlweni Cooperation" ukunikezela inkonzo lokuqala-class bonke abathengi. Okwangoku, siza kuqhubeka ukomeleza isakhono sethu kwiimarike zasekhaya ngamazwe ngokusekelwe eziphuculweyo iimveliso ezisemgangathweni kunye nenkonzo.
PengTong ukhangele phambili ekuphuhliseni kunye nawe kwixa elizayo.
Thina uyimisele kusini na inkqubo yolawulo egqibeleleyo flow imveliso, isebe asakhasayo, isebe oncedisayo, QC isebe, isebe Finance.
abathengi bethu rhoqo: H & M GAP zara Eland kwaLevi BASIC HOUSE Tommy
Industry norhwebo nokudibanisa
Thina mveliso bethu, ukuze sikwazi ukunciphisa iindleko baze bazibuyisele iingeniso emva kubathengi, kwi Okwangoku, singakwazi ukubonelela ngeenkonzo zobungcali.
Ukuba kukho naziphi na iingxaki umgangatho emva saleing, siya amalungiselelo umntu eyodwa uncedo emacaleni le ngxaki ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka
Ukhuselo oluqilimba imveliso
Sinazo zonke iintlobo isiphekepheke ngodlame 400 iiseti, lingavelisa yezigidi-14 leemitha tse ngonyaka
Ngu izakhiwo Tianjin port kunye Qingdao port, singakwazi ukubonelela inkonzo "Ixesha lonikezelo wakuzila, ukuziswa okokuqala".
Dibanisa: RM # 1201, Ximeiwuzhou Plaza, Huaian East Road, District Yuhua, Shijiazhuang, Hebei, China
100 Cotton Yarn Dyed Chambray Fabric, Yarn Dyed Check Fabrics, TC ntambo ezidaywe Ilaphu, Tc 65/35 32*32 106*58 Plain Fabric, Yarn Dyed Stocklot Fabric, Yarn Dyed Brushed Fabric,